I-cottage emangalisayo ebekwe phantsi kwendlela yelizwe ezolileyo - I-Airbnb
I-cottage emangalisayo ebekwe phantsi kwendlela yelizwe ezolileyo
Prestleigh, England, United Kingdom
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRob
I-Evergreen Cottage yindawo entle, eyakhiwe ngamatye entliziyweni yeSomerset ebekwe phantsi kwendlela yelizwe enoxolo. Le ndlu yangasese iye yafakelwa izilungiso ezikumgangatho ophezulu kunye nokufakelwa ukuncoma isihombiso sangaphakathi se-cottage esibandakanya imiqadi ye-oki kunye nokugqitywa kwe-oki yesiko kuyo yonke into enika imvakalelo yokwenyani 'yekhaya ukusuka ekhaya'.
Kumgangatho ophantsi ipropathi ibonelela ngesicwangciso esivulekileyo sokuhlala kunye neesofa ezipholileyo kunye nezihlalo zengalo ukwenza owona mlilo uvulekileyo. Indawo yokuhlala ihlukaniswe ekhitshini ngebar yesidlo sakusasa, indawo enkulu yokuhlala, ukonwabela iglasi yewayini njengoko ilanga litshona kwaye isidlo sakusihlwa silungiswa. Ikhitshi inazo zonke izixhobo kunye nezixhobo onokuthi uzilindele kubandakanya ifriji edibeneyo kunye ne-dishwasher. Kumgangatho ophezulu igumbi lokulala elikhulu lixhamla kwiifestile eziphindwe kabini ezivumela ukukhanya ukuba kungene kunye nokujonga emaphandleni akufutshane. Igumbi lokulala linegumbi lokuhlambela eline-en suite elineshawa, isitya kunye nendlu yangasese.
I-cottage ixhamla ekufudumezweni komgangatho ophantsi kuyo yomibini imigangatho enconywa ngumlilo wokwenyani ovuthayo, ilungele obo busuku bupholileyo buphonononge konke okunokunikelwa nguSomerset.
Indlu yethu ibonelela ngendawo entle yokujonga iSomerset. I-cottage kukuhamba imizuzu emi-5 ukusuka kwiBath & West Showground. Isixeko esiyimbali saseWells kunye neBruton kukumgama omfutshane. IWells ekubeni sesona sixeko sincinci eNgilani ibonelela ngeevenkile ezinkulu ezizimeleyo, iindawo zokutyela kunye neekhefi. I-Bruton ine-Hauser kunye ne-Wirth Art Gallery kwaye kutshanje i-Newt e-Bruton ivule inika imini enkulu kwi-estate yelizwe. IRoth Bar kunye neChapel ziindawo zokutyela ezicetyiswa kakhulu kule ndawo. Indawo ejikelezileyo ibonelela ngamathuba amahle okuhamba ngebhayisikile kunye negalufa.
Umbuki zindwendwe ngu- Rob
We are a working family and have lived in Somerset for 10 years. We have been renting out Evergreen Cottage with great success for the last 8 years and believe all our guests have enjoyed their stay in our cottage and all that Somerset has to offer.
We are a working family and have lived in Somerset for 10 years. We have been renting out Evergreen Cottage with great success for the last 8 years and believe all our guests have…
I-cottage ikufuphi nepropathi yethu engundoqo enika uxolo lwengqondo kwiindwendwe ezininzi eziye zahlala kwi-cottage.
Siyabuhlonipha ubumfihlo beendwendwe zethu kwaye siyakuxabisa ukuhlala kwindlwana yethu ukuphumla okukufaneleyo kunye nokuvuselela kwaye sonwabele uxolo kunye nokuzola kwelali yaseSomerset.
Siyabuhlonipha ubumfihlo beendwendwe zethu kwaye siyakuxa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Prestleigh